Ogaden News Agency (ONA) – Shir sanadeedkii jaaliyadda Edmonton oo guul ku dhamaaday kana soo qaybgaleen odayaal bulshada ixtiraam ku leh iyo aqoonyahano
Shir sanadeedkii jaaliyadda Edmonton oo guul ku dhamaaday kana soo qaybgaleen odayaal bulshada ixtiraam ku leh iyo aqoonyahano
Waxaa magaalada Edmonton lagu qabtay shirweynihii jaaliyada Ogaadeeniya taariikhdu markay ahayd Dec. 31/2011 kaasoo si wayn loo sugayey lana qabto sanad walba bisha December.
Waxaa shirka lagu furay sidii caadada inoo ahayd wacdi diini ah oo uu soo jeediyey
sh.Axmed Dayib kaasoo dhinacyo badan taabanayey kuna salaysnaa Alle ka cabsi iyo in aynu nahay umad muslim ah kuna jirta halgan xaq ah loona baahanyahay in aynu halmeel uga soo wada jeedsano cadowga mudada dheer umadeena soo dulaysanayay.
Ka dib waxaa mikrafoonka lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton mudane C/raxmaan Maxamed, oo ugu horeyn u mahad celiyey xubnaha jaaliyadda Ogaadeeniya ee sida weyn uga soo qaybgalay shirka iyo marti sharaftii uga timid meelo fog fog sida Toronto iyo Fort McCurry. Wuxuu kaloo mahad balaadhan u soo jeediyey xubnihii iyo kaadirkii waqtigooda qaaliga ah galiyey in uu qabsoomo shirweynaha jaaliyadu.
Gudoomiyuhu wuxuu aad uga hadlay waxqabadkii jaaliyada sanadkii 2011ka taas oo lagu xasuusto in ay jaaliyadu ganafka u dhigtay fashilisayna qorshayaashii gumaysigu uu doonayey inuu ku kala qaybiyo jaaliyadda ka soo jeeda shacbiga dulman ee geesiyaasha ah. Wuxuu kaloo sheegay gudoomiyuhu in ay jaaliyadu u diyaar garowday qorshayaasheeda ku aadan sanadka cusub ee 2012ka kaasoo ay balanqaadeen in ay dardar gelindoonaan waxqabadkooda soo socda, wuxuuna cadeeyey shirkani in uu gogol xaadh u yahay shirweynaha jaaliyadaha aduunka ee 2012ka ka dhici doona magaalada Toronto/Canada.
Waxaa kale oo madashii shirka hadal kooban oo ku saabsanaa taariikhda halganka
Shacabka Ogaadeeniya kasoo jeediyey madaxa hogaanka arimaha dibada ee jaaliyada halgame Maxamed Aadan Dubad hadalkaasoo macno weyn xambaarsanaa.
Gudoomiyaha jaaliyada fort McCurry mudane Sheekeeye oo hadalka qaatay ayaa wuxuu si waafi ah uga hadlay maanta meesha uu halgankeenu marayo iyo waxa loo baahanyahay ee aynu higsanayno taasoo uu ku tilmaamay madax banaani iyo in aan aayaheena ka tashano, waxayna u baahantahay arintaa in aynu dadaal dheerad ah la nimaadno.
Dadkii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Cabdullahi Olol Diinle oo ka mid ah odayaaasha sida weyn looga qadariyo dhulka Ogaadeeniya oo tilmaamay in uu u soo joogay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray halganka hubaysan ee mudada dheer ka socday Ogaadeeniya, wuxuuna qiray maanta in uu ku taaganyahay wadadii saxda ahayd taasoo ay hormuud u tahay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya.
Waxaa sidoo kale ka hadlay ruugcadaa khibrad fara badan u leh siyaasada dawlada maxaysatada ah ee Ethiopia mudane Axmed-haadi Sh.Cabdullahi oo diirada saaray maanta in ay taagan tahay Itobiya waqtigii burburka una baahantahay in la israaciyo, si hagar la’aan ahna loo taageero Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya.
Waxaa lagu soo dhaweeyey goobta oo in badan la sugayey madax sare oo ka mid ah JWXO ahna madaxa hay’ada hanti dhawrka mudane Maxamed Macalin Axmed oo dadkii shirka isugu yimid uga warbixiyey guud ahaan halganka Ogaadeeniya iyo horumarka dhinac walba leh ee uu ku talaabsaday, isagoo shacabka kula dardaarmay in ay gacmaha is qabsadaan cududoodana muujiyaan si aynu u gaadhno ujeedooyinka aynu leenahay.
Waxaa shirka jaaliyada Edmonton marti sharaf ugu ahaa aqoonyahan mudane Maxamed Cismaan oo ah gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha jaaliyadaha aduunka oo lagu qaban doono dalka Canada sanadka 2012ka. Wuxuu ku dheeraaday in uu soo bandhigo qaabkii uu u qabsoomi lahaa shirweynuhu isagoo tilmaamay shirkani in uu ka duwanaan doono shirarkii hore ee lagu qaban jiray aduunka dacaladiisa, sababta oo ah wuxuu socon jiray shirarkaa sadex maalmood laakiinse shirwaeynaha sanadka wuxuu noqon doonaa mid socda afar maalmood, isagoo carabka ku dhuftay in ay jaaliydaha Canada u diyaar garoobaan marti gelinta jaaliyadaha aduunka iyo madaxda JWXOba.Wuxuu mahad balaadhan u soo jeediyey jaaliyadaha Alberta sida wanaagsan ee ay diyaarka ugu yihiin ka qayb qaadashada shirweynaha kaalintoodana ay uga soo bixi doonaan.
Shirkan oo ahaa mid aad iyo aad u qiimo badnaa muhiimad gaar ahna u lahaa gobolka Alberta iyo shacbiweynaha reer Ogaadeeniya ee ku dhaqan, wuxuu ku soo gabagaboobay farxad iyo rayrayn, waxayna Ilaahay ka baryayaan in sanadkan cusub ee 2012ka inoo noqdo mid guul iyo gobanimo xambaarsan.
C/raxmaan/Edmonton / Canada.